Fitsapana ny fomba 20-24 martsa: Raiso ny sehatra | Vaovao, Shadowlands | WoW Guides | WoW Guides
Tompokolahy sy tompokolahy an'ny Horde sy Alliance, amboary ny fitafianao ary miomàna hiady. Tonga ny fitsapana ny Style mba hitsapana ny fahaizanao amin'ny famindrana.
Rehefa: Manomboka amin'ny 20 ka hatramin'ny 24 martsa.
Aiza: Miresaha amin'ny Transmogrification NPC eo an-toerana namana ary milahatra ho an'ny seho 6-mpilalao.
Inona no hatao: Ny mpandray anjara dia hanana roa minitra hamoronana andiana fiovan-tarehy miaraka amin'ireo zavatra avy amin'ny fanangonana azy ireo mifototra amin'ny lohahevitra iray izay hatolotra eny an-tsehatra. Roa isaky ny roa, hiakatra an-tsehatra izy ireo ary hampiseho ny zavatra noforonin'izy ireo. Ireo mpilalao efatra ambiny dia ho tompon'andraikitra amin'ny fifidianana ny iray heverin'izy ireo fa nisolo tena indrindra ny lohahevitra.
Angony ny hoditra rehetra
Angony ny fitafiana 12 rehetra handehananao amin'ny traikefa nahafinaritra.
Ensemble: Chainmail an'ny Hunt tsy maharitra
Ensemble: Battlegear tsy voafetra natory
Ensemble: Akanjo mifandraika amin'ny fanahy mangina
Antoko: Regalia Mana-Etched
Antoko: Obsidian Marauder Garb
Ensemble: Battleplate mahitsy
Ensemble: Robes of Ordeal Ordeal
Ensemble: Tundra Grudge Armor
Antoko: Crimson Sentinel Garb
Ensemble: Takelaka Spinosaurus
Azonao atao koa ny mampiasa ny mari-pamantarana Test of Style amin'ny kojakoja hanatsarana ny akanjo voafantina ho an'ny fitsapana ny fomba. Ireo kojakoja ireo dia laniana rehefa ampiasaina ary hiseho fotsiny rehefa eo amin'ny sehatra ianao, na dia maharitra ny fifaninanana iray manontolo aza izy ireo.
Ilay mpivarotra mahatalanjona Nellie Cantomoda dia manana lobaka sy takelaka amidy ao amin'ny Test of Style, raha sanatria adinonao ny mitondra azy.
Mangataha fanampiana amin'ireo mpankafy anao
Mila fanampiana eo ambony sehatra ve ianao? Aza manahy fa hanome tanana anao izahay. Azonao atao ny mividy ny karatra mpankafy anao, izay azo ampiasaina hanangonana mpankafy hampifaly anao mandritra ny fifaninanana.
Tsy mendrika jerena izany! Mila manadio tsara ianao alohan'ny hanombohan'ny fifaninanana.
Misafidiana pose ary mandehandeha (eo amin'ny catwalk, eny, eo amin'ny catwalk).
Rehefa milamina ny glitter dia isaina ny vato, ny mpandresy ny toerana voalohany, toerana faharoa y Toerana fahatelo hahazo valisoa izy ireo. Aza manahy raha tsy mpandresy ianao dia hahazo ilay Fitsapana ny loka fampiononana Style. Ireo loka ireo dia misy Fitsapana ny mari-pamantarana Style azo avotana ho an'ny fitaovan'ny transmog manokana any Dalaran.
Ireo fashionista Azerothiana koa dia afaka manararaotra ny serivisy volo maimaim-poana sy serivisy mandritra ny hetsika Trial of Style. Na dia tsy mandray anjara aza ianao dia azonao atao ny manova ny volonao sy ny transmogrification anao nefa tsy andoavam-bola amin'ny fandehanan'ny hetsika
Vonona ny handeha amin'ny farany ve ianao?
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: WoW Guides » About us » Fitsapana ny fomba 20-24 martsa: Raiso ny lampihazo